LG wuxuu soo bandhigayaa LG G5 casriga casriga ah | Wararka IPhone
LG wuxuu soo bandhigayaa LG G5 casriga casriga ah
Sanadihii la soo dhaafay, wax badan ayaa laga sheegay mashruuca Google oo noo ogolaanaya inaan shakhsi ka dhigno taleefoonadeena iyadoo loo abuurayo hadba inta aan dooneyno inaan ku qarash gareyno, iyadoo lagu darayo batteri badan, kaamiro fiican, xusuus badan ... laakiin mashruucan wali ma uusan dhameystirin iftiinka oo la arko. LG waxay hadda soo bandhigtay LG G5 oo leh fikrad la mid ah, tan iyo markii ay noo ogolaato kudar waxyaabo kala duwan si aad u hagaajiso waxqabadkeeda.
LG G5-ka cusub wuxuu noo ogolaanayaa inaan balaarino xulashada kamarada isku dhafan qalabka iyo kuwa kuhadlaya ee ay ku dhexjirto kamarad leh astaamo xirfad leh ku dhowaad (keydinta masaafada) oo aan doorano inaan kudarno kuwa kuhadlaya shirkada B&O. Si loogu daro noocyada kala duwan, waa inaan ku dhaji tabka hoose ee qalabka.
Marka moduleka la soo saaro, waxaan bilaabi karnaa ku darida LG Friends, sida shirkadu ugu yeerto. Qalabka LG CAM Plus wuxuu u beddelaa qalabkeena kamarad xirfad leh. Qaybta 'LG Hi-Hi Plus' waxay noo oggolaaneysaa inaan ku raaxeysano muusikada aaladdayada leh tayada ay bixiso Bang & Olufsen (B&O). Fikraddu ma xuma, laakiin wali way cagaaran tahay, ilaa modulladani waxay si weyn u kordhiyaan cabirka qalabka si ka duwan mashruucii Google ee aan kor kaga soo hadlay.
Marka laga hadlayo qeexitaanka qalabka, LG G5 ayaa leh shaashad 5,3-inji ah, isku xirka USB-C iyo xukun deg deg ah. Gudaha waxaan ka helnaa processor-ka cusub ee Qualcomm Snapdragon 820 oo ay weheliso 4 GB oo RAM ah oo shaashadda ku maamuli doonta xallinta QualHD. Dhanka batteriga, waxaan ogaanay in LG G5 uu na siinayo 2.800 mAh, batteri ku mahadsan modullada aan ku balaarin karno dhib la'aan. Marka laga hadlayo dhinaca aaladda, kamaradda hore waa 5 megapixels halka gadaalna (lagu ballaadhin karo qaybaha) uu gaarayo 16 megapixels. Qiimaha, LG ma aysan shaacin waqtigaan. Waxa aan ognahay ayaa ah inay suuqa soo galayso bisha Juun ee soo socota.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Tartanka » LG wuxuu soo bandhigayaa LG G5 casriga casriga ah
Waxaan layaabay Bang & Olufsen inay jiidayaan nacasnimadaas. Waxaan u maleynayay inay ogaan doonaan sida loola socdo. Marka laga hadlayo inta soo hartay ... ma soo jiidaneyso dareenkeyga. Midkoodna, ama S7 ... Aakhirka waxay raadinayaan inay abuuraan baahiyo dadka. Kaliya wac, shabakadaha bulshada, internetka iyo adeegsiga barnaamijyada. Waxyaabaha ku saabsan ku darida qalabka taleefanka ...
R56 Xaqiiqdii waxaad noqon laheyd qofka ugu horeeya ee u sacbinaya hadii fikrada ay ka imaan laheyd Apple.
Tani waa waxa "i" ee ku jira alaabada Apple macnaheedu yahay sida uu qabo Steve Jobs